Madokero - Howling Pixel
Muzvidzidzo zvinotevera: pimanyika; Jekanyika; neTarachisi, madokero kana mavirira (West kuEnglish) idivi kana rudzivo kunonyura nako zuva manheru ega ega. Panopimwa gonya rinokwana 180o kubva kuMadokero kusvika kuMabvazuva.
Kunhoka (to burn out - of fire).
Mururimi rweKikongo vanoti yila (to begin to grow dark) vachireva kuvira kwezuva.
Mururimi rweLuwanga vanoti okhwira (to become dusk) vachireva kuvira kwezuva.
VaTonga vanoti kumbo (n. west) zvichireva kumadokero.
Mabhazi anoenda kumusha akwirirwa kupi?'Mepu dzepanyika dzinotaridza mativi mana erudzivo anoti: Mabvazuva, Madokero, Maodzanyemba, neChamhembe.
Maodzanyemba kwakadziva kuMadokero
KuMaodzanyemba kwakadziva kuMadokero (North West in English) ndirwo rudzivo rwunoti kana munhu akatarisa kuMaodzanyemba, anofanira kutenderera gonya rinokwana 45o achinanga kuMadokero. Rudzivo urwu rwuri 45o kubva kuMaodzanyemba, uye 45o kubva kuMadokero.
Mbembesi maruwa ari kuMatebeleland North pachinhamwe chinokwana 43km kubva kuBulawayo kuri kwakadziva Madokero eMaodzanyema.